Kumbuutarrada 99 Dal Oo La Weerraray | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM Kumbuutarrada 99 Dal Oo La Weerraray
Weerrar ballaadhan oo dhanka internetka oo la rumeysan yahay in loo isticmaalay qalab laga soo xaday Hay’adda Ammaanka Qaran ee Mareykanka ee NSA ayaa waxaa lagu qaaday hay’ado ku kala yaal daafaha dunida. Shirkadda Avast ee ka shaqeysa ammaanka internet-ka ayaa sheegtay in ay aragtay 75,000 oo kiis oo ah waxa loo yaqaan WannaCry oo lagu doonayo madaxfurasho oo ka dhacay caalamka oo dhan.
Meelaha sida weyn uu u saameeyay weerrarkan waxaa ka mid ah hay’adda Addeegga Qaran ee Caafimaad ee England iyo Scotland.
BBC-da ayaa waxa ay fahansan tahay in ku dhawaad 40 hay’adood oo hoos taga barnaamijka Addeegga Qaran ee Caafimaad iyo isbitaalada qaar ay arrintan saameysay, iyadoo la baajiyay ballamo iyo howlgallo la fulin lahaa. Wararku waxaa kale oo ay sheegayaan in weerrarku uu saameyay dalal badan oo Yurub ah.
Dadka ayaa barta Twitterka soo dhigayay sawirro muujinaya kumbuyuutarro weerrarku uu saameeyay oo ay ka mid yihiin shirkad maxali ah oo iibisa tigidhada tareenada oo ku taal dalka Jarmalka iyo jaamacad ku taal waddanka Talyaaniga.
Wararka qaar waxa ay sheegayaan in Ruushka ay haleeshay saameyntii ugu ballaarneyd ee hal dal soo gaadha.